MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sadex maalin ka hor u dhoofay dalka Jamhuuriyada Jabuuti, halkaas oo kulamo kula yeelanaya qaar kamid ah madaxda dalkaas oo ay ka wada hadeen arrimaha labada dhinac ka dhaxeeya, Siyaasadda, Ammaanka, Dhaqaalaha iyo iskaashiga arrimaha gobalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horey loo shaaciyey in ay booqashadaas qaadan doonto labo maalmood, balse ilaa iyo hadda kuma soo laaban gudaha Soomaaliya, gaar ahaana caasumada dalka.
Warar aan ka helnay safaarada Soomaaliya ee dalka Jabuuti ayaa daaha ka rogaya in uu Madaxweyne Farmaajo kadhoofay dalkas shalay aroornimadii hore, isagoo ku sii jeeda dalka Itoobiya, gaar ahaana magaalada Addis Ababa.
Booqashada Madaxweynaha ee Itoobiya ayaa la qariyey, waxaana ku duugan arrimo badan oo ku wajahan siyaasaddaha gudaha Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha Jubbaland oo ay labada dhinac ka wada hadlayaan, sidda ay wararku sheegayaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay madaxda Itoobiya, gaar ahaana Ra`iisulwasaaraha Dr Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen ammaanka, Siyaasadda, iskaashiga iyo xariirka dhaw ee kuwajahan arrimaha Jubbooyinka oo ay dhinacyadu si adag ugu leeyihiin saameyn ay isku dayeen.
Itoobiya ayaa isku dayday in ay ciidamadeeda Kumaandooska galiso Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Kismaayo waxayna waqti badan galiyeen sidii ay taasi ku dhici lahayd, balse ilaa hadda ma jirto wax horumar ah oo ay ka gaartay.